« Boky mitety vohitra » : nahatety fokontany fito ny Association Gazela | NewsMada
« Boky mitety vohitra » : nahatety fokontany fito ny Association Gazela
Ny tao Tsarazaza, kaominina Itaosy, no fokontany fahafito nentanin’ny fikambanana Gazela mikasika ny vaky boky, omaly. Azo lazaina ho tratra ny tanjona, satria fokontany roa isam-bolana no nezahina hotetezina, amin’ny alalan’ny tetikasa “Boky mitety vohitra”.
Manentana ny ankizy hazoto hamaky boky ny «Association Gazela pour le développement social (AGDS), pour le développement social ». Tafiditra indrindra ao anatin’ny tetikasa antsoina hoe « Boky mitety vohitra », avy amin’ny tsirin-kevitry ny mpiara-miombon’antoka any ivelany, antsoina hoe « Le livre aux mille jebus » sy ny « Solidarité avec Madagascar ». Eo ihany koa ny avy eto an-toerana, ny
Editions Jeunes malgaches. Izany hoe, anisan’ireo mpiara-miasa, manatontosa ity tetikasa ity ny AGDS.
Fanambin’ny fikambanana ny hahatsidika fokontany roa ao anatin’ny iray volana. Mihoatra izay anefa ny vita, satria tao anatin’ny iray volana ary hatramin’ny omaly, ankizy ao anatin’ny fokontany fito (Ambohiparaky, Ambodifasika, Anjakaivo, Ambaniala, Ambanilalana, Bemasoandro, Tsarazaza), ao amin’ny kaominina Itaosy, Bemasoandro ary Andranonahoatra, no efa nentanina.
Rehefa tonga eny an-toerana ireo mpiasa an-tsitrapo avy amin’ny fikambanana, atomboka amin’ny fanentanana mikasika ny fahadiovana, indrindra ny fanasana tanana, ny fanentanana. Tokony hadio tokoa mantsy ny tanana na mialoha ny hamakiana boky aza mba tsy handoto sy hanimba ito farany. Avy eo, izarana boky ireo ankizy.
Marihina fa amin’ny teny malagasy sady arahina sary fanehoana ny boky zaraina ka ao ny angano, ny tantara, sns, … izay rehetra mahaliana ny kilonga. Iarahana mamaky ny boky ka rehefa vita izany, averina amin’ny fikambanana.
Tanjon’ny tetikasa « Boky mitety vohitra » ny hampahafantarana ny ankizy ny hasarodibin’ny boky. Eo koa ny fanazarana azy hankamamy vaky boky. Etsy ankilan’izay, omen-danja, ao anatin’izao tetikasa izao, ny asan’ny mpanonta boky, izay misedra olana samihafa, eto amintsika.